Jenezy 14 - Ny Baiboly
13Dia tonga ny anankiray tamin'ireo mpandositra nilaza izany tamin'i Abrama, Hebrio, izay nonina tao amin'ireo terebintan'i Mambre, dia ilay Amoreana rahalahin'i Eskola sy Anera, fa olona vita fanekem-pihavanana tamin'i Abrama ireo. 14Vao ren'i Abrama fa hoe lasan-ko babo ny rahalahiny, dia nomaniny ny ankohonany mahatoky indrindra amin'ny ady, izay teraka tao an-tranony, valo ambin'ny folo sy telon-jato, ka nenjehiny hatrany Dana ireo mpanjaka ireo. 15Natokotokony ny olona nentiny mba hanao sovok'alina izy sy ireto mpanompony, ka nandresy sy nanenjika an-dry zareo hatrany Hoba, ao an-kavian'i Damasy. 16Nentiny nody daholo ny fananana; azony koa Lota rahalahiny, mbamin'ny fananany, sy ny vehivavy ary ny olona rehetra.
21Dia hoy ny mpanjakan'i Sodoma tamin'i Abrama: Omeo ahy ny olona fa ny fananana no ento ho anao. 22Fa hoy Abrama tamin'ny mpanjakan'i Sodoma: Izaho efa nanangan-tànana tamin'ny Tompo Andriamanitra avo indrindra, izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23fa tsy haka amin'izay rehetra mety ho anao, hatramin'ny singan-taretra ka hatramin'ny hoditra fehin-kapa, mba tsy hilazanao hoe: Izaho no nampanan-karena an'i Abrama. 24Tsy hitana na inona na inona ho ahy aho, afa-tsy izay nohanin'ny zatovo, sy ny anjaran'ny olona momba ahy dia Anera sy Eskola ary Mambre; ireo dia haka ny anjarany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1613 seconds